Guys njengomakoti amantombazane, kuyajabulisa Bayaqaphela ukuthi uthando lwabo bese ulinda. Ngisho noma umlingani wakho uthi amaqiniso abonisa okuphambene, uyazi - akusiyo. Njengoba isisho esidumile :. "Izwi uhlobo futhi ikati limnandi" Ngakho musa skimp on amazwi efudumele futhi ithenda ngothandiweyo wakhe.
Bhala kwathi nhlo, ngakho-ke mnandi?
Ukuze uqale, asichaze ngqo ukuthi sizokuthumela umyalezo: nge-SMS, e-mail noma ukubhala ngezinga elithile engosini yokuxhumana. Ingabe kukhona umehluko phakathi kwalezi zinhlobo zokuxhumana? Isimanga siwukuthi kodwa kancane sisekhona. umlayezo we-SMS kukhawulwe ngenani izinhlamvu, futhi akulula ngaso sonke isikhathi ukufunda "inkondlo" phezu amashidi ambalwa screen umakhalekhukhwini. Kodwa uma kuziwa e-mail noma yimuphi yokuxhumana, futhi yilapho ukuze ujike.
Bhala ukuthi umfana ukuthi yayijabulela nge-SMS?
Uma unquma ukuba avume uthando lwakhe, ke udinga beveza isitatimende lesifinyetiwe, kodwa ithe juqu futhi ulwazi. Ngokwesibonelo:
1. I love you, njengoba ulwandle uthanda kwelanga.
2. Phakamisa ikhanda lakho futhi sibheke phezulu esibhakabhakeni. Inkanyezi ngobukhulu futhi emuhle kakhulu uzokutshela okuningi Ngiyayithanda wena!
3. I love you, futhi akudingeki amazwi ngaphezulu.
Kungenzeka futhi ukujabulisa nesoka lakhe funny sms uthando. Ngokwesibonelo:
1. Subscriber othandekayo, uqaphele uthando okuzungezile! Yiphani, khona kuzakuba kubi.
2. Uma Kwadingeka a ruble ngoba yonke imicabango kini, mina ayeyoba lowo muntu kunabo bonke emhlabeni.
W bese ubhala umfana, ngakho-ke mnandi ukulala?
Uma unquma uthumele umlayezo ku ebusuku insizwa ke lapho ehlanganisa ungase futhi baphuphe up, isibonelo: "Ukulala, nonogwaja yami, amnandi, elimnandi. Ngine nawe ngezinyawo futhi ithi endlebeni yakho: "amaphupho Good, isilwane engilithandayo kancane!" Noma umane ukubhalela ukushisa, ezifana lo: ". Uthando lwami, ebusuku okuhle, engikucabangayo ngawe"
Bhala ukuthi umfana ukuthi wajabula-e-mail?
Njengoba kushiwo ngaphambili, amagama ambalwa lapha balahle. Une ukukutshela okwengeziwe ngemizwa yami ozithandayo. Ungenza lokhu ngezindlela ezimbili - evesini noma temibhalo yephrozi. Indlela yesibili labo abangekho uyakuthanda ukweba imicabango yabanye abantu. Nakuba kukhona lutho olungalungile kulokho, ukuze umuntu esithandayo ukuba ngicaphune amazwi amnandi othando ebhaliwe zakudala. Njengoba ama-social network, they nzonzobala ngokuvamile esetshenziselwa zokuxhumana. Uma usukulungele lokho uzokuphendula kweso, ungabhala guy amazwi enhle ngendlela eyinqaba ngawe. It kungenziwa waqaphela izinkulumo obathandayo ezifana: "Pupsik", "bunny", "ikati" nokunye, noma, isibonelo, inkulumo ethi, okuyinto obaziyo kuphela. Lapha azikho imingcele, kodwa Ungeqisi it. Kuyinto into eyodwa - ukubhala guy SMS enhle ebusuku, kuhlukile - ukubhala zonke ingxenye yehora. Yiqiniso, abameleli besilisa kamnandi nge ukunakwa okunjalo, futhi nakakhulu yintombi yakhe, kodwa kungcono ukuba ikhiphe emnandi.
Kufinyeta, siphawula ukuthi namahloni imizwa yabo akudingekile futhi kubalulekile ukuba ngiziveze ngokukhululekile. Obathandayo futhi emnene amazwi amadoda ukuphakamisa isimo futhi unike intshiseko, ikakhulukazi njengoba manje ukuthi yini ukubhala nsizwa, ngakho-ke kwaba mnandi.
Izinto zokuhamba zomphakathi: izakhi eziyisisekelo, Ukwahlukanisa
Indlela ukususa amabhanela in the "Opera"? Ukuvimba ukukhangisa amabhanela in the "Opera"
"Umshayeli isiqophi wayeka besabela useluleme ngempumelelo" - ikhambi lenkinga
Abadlali abadumile. "Cold Intaba," U-Anthony Minghella